विश्वकपमा धनि दर्शकका नजरबाट लुकाउन बिदेशी कामदारलाई घर पठाउदै कतार सरकार !
काठमाडौँ : विश्वकप फुटबल हेर्न आउने समृद्ध दर्शकका नजरमा नपरून् भनेर आप्रवासी श्रमिकहरूलाई चार महिनाका लागि स्वदेश पठाउने कतार सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण छ । यसबाट फुटबल महामेला आयोजना गर्ने कतारी सपना पूरा
गराउन आठ रंगशालासहित पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन पसिना बगाएका नेपालीलगायत विभिन्न मुलुकबाट गएका श्रमिकहरूको घोर अप’मान भएको छ । जसले कतारको शोभा बढाउन आफ्नो श्रमको योगदान दिए, तिनकै उपस्थितिलाई विश्वकपको शोभाविपरीत मान्ने यो मानसिकता अशोभनीय मात्र होइन, खेदजनक नै छ ।
आप्रवासी कामदारहरूलाई बिलकुलै फरक दर्जाको मानिसको व्यवहार गरेको यो अमानवीय निर्णयलाई कतार सरकारले सच्च्याउनु आवश्यक छ । यो निर्णयले खासमा कतार सरकारको अनुचित आडम्बर उजागर गरिदिएको छ । यसको का’र्यान्वयन हुँदा भोलि फुटबल महामेला हेर्न आउने सम्भ्रान्त दर्शकहरूका नजरमा विपन्न मजदुरहरू तत्क्षण नपर्लान्, तर कतारको वैभव ठडिनुमा लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले टेको दिएको तथ्य उनीहरूले थाहा नपाउने होइनन् ।
कतारका रंगशालालगायतका पूर्वाधार बनाउन सहभागी श्रमिकहरूलाई लामो बिदामा घर पठाइएको र त्यसको अन्तर्य तिनलाई फुटबलका दर्शकहरूको आँखामा नपार्नु भएको यथार्थ बुझ्दा उनीहरूमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? उनीहरूले कतार सरकारको यो निर्णयलाई राम्रै मान्लान् कि ढोङको पराका’ष्ठा ठान्लान् ? यसले कतारको शान अझ उज्यालो बनाउला कि धमिल्याउला ?
यी प्रश्नहरूमा कतारले विचार पुर्‍¥याएको देखिँदैन । उसै त, आप्रवासी श्रमिकहरूको शो’षण भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पर्याप्त आलोचना खेपिसकेको कतारको साख यस प्रकरणले अझ तल पु¥र्‍याउने निश्चित छ । त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्वि’चार गर्नु कतारको आफ्नै हितमा छ ।
दुनियाँलाई थाहै छ— कतार आप्रवासीहरूले भरिएको मुलुक हो । यहाँ कतारी नागरिकको तुलनामा झन्डै ८ गुणा बढी आप्रवासीहरू बस्छन् । कतारको वर्तमान र भविष्य दुवै अधिक मात्रामा यिनै आप्रवासीहरूको हातमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा कतार सरकारले यस किसिमको निर्णय गर्दा सम्बन्धित कामदारहरूको मनमा मात्र चोट पुग्दैन, विश्व समुदायमा पनि गतिलो सन्देश जाँदैन ।
उल्टो यसले कतारको दोहोरो चरित्र बाहिर ल्याउँछ, र पहिले भए भनिएका शोष’णका आ’रोपहरूलाई पुष्टि गर्न बल पुर्‍याउँछ । त्यसैले सबै आप्रवासी श्रमिकहरूको सम्पूर्ण मानव अधिकारलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै तिनको उपस्थितिप्रति हीन’ताबोध होइन, गर्व गर्न कतार सरकारले सक्नुपर्छ ।
आफ्नै हातले बनाएको मैदानमा मेसी र रोनाल्डो खेल्न आउँदा कतार सरकारले आफूहरूलाई खेल हेर्न निषेध गर्न लागेको थाहा पाएर उनीहरू अहिले खिन्न छन् । यी श्रमिकहरूलाई थाहा छ— उनीहरूको कामको सम्मान गरेर कतार सरकारले लामो तलबी बिदा दिन लागेको होइन, उनीहरूलाई छिःछिः–दूर’दूर गरेर खेलस्थलबाट बाहिर पठाउन लागेको हो । त्यसैले कामदारको योगदानको बदलामा तिर’स्कार गर्ने यो रबै’या कतारले त्याग्नुपर्छ ।
यो निर्णयबाट नेपाली कामदारलाई पनि आघात पुग्नेछ । अहिलेसम्म २० लाख नेपाली उक्त मुलुक गइसकेका छन् भने करिब चार लाख कार्यरत छन् । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभा’वमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ ।
कतिपय कामदार त त्यहाँ गएको धेरै समय भएको पनि छैन । कतिले जाँदा लागेको ऋ’ण तिर्न नै बाँकी हुन सक्छ ।
त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारले कतारसित आफ्नो सरोकार राख्नुपर्छ । नेपाली कामदारहरूको घरफिर्तीलाई सहज र स्वैच्छिक बनाउन आग्रह गर्नुपर्छ । त्यहीँ बसेर टिकट काटेर फुटबल हेर्न चाहनेले यो अवसर पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२०७८ पुष १९, सोमबार ०५:४६ गते 1 Minute 2832 Views